Sawirrada todobaadka iyo Afrika: 26 May - 1 June 2017 - BBC News Somali
Halkan ka daawo xulka sawirrada isbuucii la soo dhaafay ee qaaradda Afrika.
Image caption Isniintii ayaa sarkaalkan ka tirsan booliska Nigeria waxay qeyb ka ahayd dabbaaldagga maalinta dimuqraadiyadda oo lagu xuso markii uu dalku ka wareegay nidaamka xukunka milatariga
Image caption Olufunke Oshonaike oo u dhalatay dalka Nigeria oo ka qeybgashay tartanka Teeniska ee dumarka oo Arbacadii ka dhacay dalka Jarmalka.
Image caption Emmanuel Rutema oo u dhashay dalka Tanzania oo iskutijaabinaya gacan macmal ah oo cusub ka dib markii dad aaminsan in jirka dadka Albinooska ah uu dawo u yahay waxyaabaha qaar.
Lahaanshaha sawirka Michael Khateli
Image caption Xarunta laga raaca tareenada ee magaalada Mombasa. Kenya ayaa xariga ka jartay tareen cusub Arbacadii
Image caption Sawirkan oo la qaaday Sabtidii ayaa waxaa kuwada jira madaxweynaha Kenya , Uhuru Kenyatta, madaxweynaha Guinea, Alpha Conde, madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika, Akinwumi Adesina, madaxweyne ku xigeenka Nigeria Yemi Osinbajo iyo ra''iisal wasaaraha IKtoobiya Hailemariam Desalegn. Dhammanatood oo ka qeybgalay shirka G7 ayaa waxaa sawirka ku wehliyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Image caption Mr Trump ayaa sidoo kale taagerayaal ku leh koonfur bari Nigeria halkaasoo dadka qaar ay Talaadadii u dabbaaldagayeen xuska sanadguurada kontonaad ee ka soo wareegatay madax banaanida Baifra. Ku dhawaaqidda madax banaanida gobolkaasi ayaa horseeday dagaal sokeeye oo ay ku dhinteen hal milyan oo qof.
Image caption Carruurtan ku sugan magaalada Abidjan, ee dalka Ivory Coast, ayaa daawanaya sawirrada xilliyadii dagaalada sokeeye ay ka jireen dalkaasi.
Lahaanshaha sawirka AFP/PGDBA ^ HND
Image caption Gabdhihii ay Boko Xaraam ka afduubatay Chibok ee dhawaan la soo daayay oo ku sugan magaalada Abuja.
Image caption Jimcihii ayaa ciyaaryahankan u dhashay Guinea, Salif Sylla waxa uu ka qeyb qaadanayay tartanka Koobka Adduunka ee ciyaaryahannada ay da'doodu ka yartahay 20. Kooxdiisa ayaa dalka Kuuriyada Koonfureed kula ciyaartay Argentina
Image caption Kooxda ciyaar dhaqameedka dalka Congo oo ciyaar dhaqameedkooda ku soo bandhigay dalka Hindiya.
Sawirada waxaan ka soo xiganay AFP, EPA, Getty Images iyo Reuters